Nhau - Fiber Girazi Sumo
Fiber Girazi Sumo
Mvere dzemagirazi rudzi rwemhando yekugadzira. Inoshandisa quartz jecha, limestone, dolomite uye mamwe masango ores as the main raw raw, inosanganiswa neimwe svuturu yesoda, borax uye mamwe makemikari zvinyoro zvekunyungudika mugirazi. Muchimiro chakanyungudutswa, chinokandirwa mumafurasitiki akajeka nesimba rekunze uye nekuputika. Iyo mitezo uye iyo fambo yacho yakatarisana-nhatu-mudimbu nepakati uye yakabatikidzwa pamwe chete, kuratidza yakawanda midiki midiki. Mapundu akadaro anogona kutaridzwa semapores. Naizvozvo, girazi mvere dzinogona kutaridzika senge porous zvinhu zvine yakanaka yekupisa kupisa uye neruzha rwekupinza zvivakwa.
Iyo centrifugal girazi mvere yakanzwikawo ine yakanyanya kunaka kunyorovesa uye yekuremara maitiro, kunyanya ine yakanaka kunyorova maitiro kune yakaderera frequency uye dzakasiyana vibration mhere, inobatsira kuderedza ruzha kusvibisa uye kugadzirisa nzvimbo yekushanda.
Mvere yegirazi yakanzwika nealuminium foil veneer zvakare ine yakasimba kupisa radiation kupikisa. Icho chakanakira kurira kwezwi rekushandisa kune yakakwirira-tembiricha mashopu, makamuri ekudzora, muchina wekamuri linings, makomendi uye padenga remafurati.
Mafuta egirazi isina moto (anogona kuvharwa nealuminium foil, nezvimwewo) ine zvakawanda zvakanakira senge murazvo uchidzorera, isina-chepfu, kupokana nekuora, kushomeka kwakawanda, kudzika kwemafuta, kusimba kwemakemikari, kushomeka kunyorova kwakanaka, nezvimwewo. .
Izvo zvakadzika zvinyorwa zvegirazi woolg bhora uye yakatsetseka fiber inogona kuvhara mhepo zvakanaka uye kudzivirira kuti irege kuyerera. Iyo inobvisa kuendesa kupisa kupisa kwemhepo, inoderedza zvakanyanya kufambisa kwechigadzirwa, uye nekukurumidza inowana kuendesa kwechirevo, saka ine yakanakisa kupisa kwemafuta, kunyudza inzwi uye kurira kwemhedzisiro.
Yedu yegirazi mvere ine yakanaka yepamusoro tembiricha yekusimbisa mafuta, kugara uye kuramba kune yakanyanya kupisa shrinkage. Iyo inogona kuchengetedza kuchengeteka, kusimba uye kukwirira kwakanyanya kwenguva yakareba mukati meiyo yakurudzirwa yekushisa tembiricha nzvimbo uye yakajairwa mamiriro ezvinhu.
Mvura-yakavakirwa zvinoreva kugona kwechinhu kuramba chidziviriro chemvura. Yedu yegirazi mvere inowana mwero wekudzivirira mvura isingasviki 98%, izvo zvinoita kuti iwedzere kupfuurira uye yakagadzikana yemagetsi insulation performance.
Iyo haina asbestosi, isina fung, haina hutachiona hwekukura hwaro, uye inozivikanwa sechinhu chine nharaunda chigadzirwa neNational Building Equipment Testing Center.